आर्थिक अभाबका कारण पम्फी वलीको बिगत ५ बर्ष देखि उपचारमा समस्या, सहयोगको याचना – Rapti Khabar
असार ०५, रोल्पा । गरिबीले थिचिएकाहरु अभाबको जाँतोमा पिल्सिरहेको बेला, साँझ-बिहान एक छाक खान टार्न मुस्किल पर्ने तिनैलाई रोगलागेपछि, जिउन झनै मुस्किल छ । नेपाली समाजमा एकातिर सम्पतिको रासमा रमाउनेहरु छन्, आर्को तिर गरिबको चपेटामा थिचिएर छटपटाई रहनेहरु छन् ।
त्यसरी नै गरिबी र अभाबका बीच छटपटाई रहेकी रोल्पाकी ४७ बर्षिया पम्फी कुमारी वली उपचार नपाएर रोगले थला परेकी छन् ।
रोल्पा गंगादेव -३ नाउलीकी पम्फी वली बिगत ५ बर्ष देखि मृगी रोगबाट ग्रसित थिइन् । घरमा खाना पकाई रहेको बेला मृगिका कारण बेहोस भईन र उनको दुवै खुट्टा खाना पकाई रहेको चुलोमा परे ।
संयोगले छोरी त्यहीबेला आइपुगिन र आगोमा जलेर बलिरहेका आमाका खुट्टा हतपत निकाली दिइन ।
आर्थिक अभावका कारण घरेलु जडिबुटी द्वारा उपचार गरिन । गाउँकै सानातिना मेडिकलमा उपचार गराइन । खुट्टाका जलेका औंलाहरू झर्दै निको भए तर गोलि गाँठोको जोर्नीको घाउ निको नभएर बल्झियो । घाउ कुहिएर गहनाउन थाल्यो ।
यता मजदुरी गर्दा श्रीमान रेशम डाँगीको आँखा फुट्यो । उनले मजदुरी गर्दा ढुङ्गा फुटाउदा ढुङ्गाको टुक्रा लागेर एउटा आँखाको ज्योती नै गुमाए । भएका छोरीहरु बिबाह गरेर गए । साथमा एक छोरा छन् ।
यसरि आर्थिक अभाबका कारण बिगत ५ बर्ष देखि उपचार नपाएर घाउ बल्झिरह्यो । घाउ बढेर खुट्टा नै झर्ने अबस्थामा पुगेपछि तिन दिन अघि मात्रै चितवन क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि श्रीमानले लगे तर उपचारका लागि आर्थिक समस्याका कारण संकटमा परेका छन् ।
श्रीमान डाँगीले दुखेसो पोखे, ‘हामी जस्तै दुखि गरिबलाई मनकारीहरुले सहयोग गर्छन भन्ने सुनेको छु, कसैले सहयोग गरे भगवान ठान्ने थिए ।’
सहयोगको लागि रमेश बहादुर डाँगी (बिरामिको श्रीमान)को जनता बैक बचत खाता नम्बर ०४९१०१०७०४६७६०१ अथवा रमेश बहादुर डाँगीको फोन नम्बर ००९७७९८४८०१६५०६ मा सम्पर्कगरि सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ ।
आदरणीय र प्रियजनहरु ! ‘जेलमा मार्सी धानको भात खान्छन् सुदर्शन’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि म केही नलेखी बस्नै सकिन । प्रश्न उठनसक्छ, राजनीति गर्ने नेताहरुको बारेमा गरिने प्रशंसा र आलोचना दुबै स्वभाविक हुन्छन् । किन यस्तो प्रतिक्रिया दिनुप¥यो ? मलाई माफ गर्नुहोला ताली र गाली अथवा एउटा सूचनाले पार्ने प्रभाव र असर भन्दा पनि मलाई […]